Sunday .7June . 2020
သတို့သမီးထက် ဂိမ်းကိုပိုချစ်တဲ့ သတို့သား မင်္ဂလာပွဲမှာ ဂိမ်းပဲဆော့နေလို့ ဝေဖန်ခံနေရ
ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်ကတည်းက လူမှုကွန်ရက်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကတော့ မင်္ဂလာပွဲမှာ သတို့သားဟာ ဂိမ်းကို စိတ်ဝင်တစား ဆော့နေတဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မင်္ဂလာပွဲကိုတောင် စိတ်သိပ်ဝင်စားပုံမပြဘဲ၊ ဂိမ်းကို သည်းကြီးမည်းကြီး ဆော့နေလို့-
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့ သူရဲ့လုပ်ရပ်ကို ချီးကျူးသူထက် ဝေဖန်သူက ပိုများနေပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ဒီအမျိုးသားကို အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ တကယ်လည်း သူရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ သူဟာ ဂိမ်းကစားချင်စိတ်ကို နည်းနည်းလောက်တော့ ထိန်းသင့်တာပေါ့။
တစ်ချို့ကလည်း ဒီအမျိုးသားရဲ့အပြုအမူဟာ အတော်လေး အတ္တကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြူအမူနဲ့ တူကြောင်း၊ သူဟာ မိဘမောင်ဘွားတွေက အလိုလိုက်လို့ ဆိုးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပုံရကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ သတို့သမီးအဖို့တော့ ကံဆိုးတယ်လို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို WorldOfBuzz က ဖော်ပြထားတာပါ။ သတို့သမီးဟာ ခင်ပွန်းအသစ်စက်စက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို အတော်လေး ဘဝင်မကျ ဖြစ်နေပေမယ့် မပြောသာတဲ့သဘောမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဧည့်သည်တစ်ယောက်က လက်ဖွဲ့ပေးတာတောင် သူက တွန်းပစ်လိုက်ပါသေးတယ်။
ဗွီဒီယိုကတော့ TikTok ဗွီဒီယိုပုံစံနဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတာပါ။ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးတို့ အမည်ကိုတော့ ဖော်ပြမထားပါဘူး။ နောက်ပြီး အိန္ဒိယက မင်္ဂလာဆောင်လို့သာ သိရပေမယ့် ဘယ်မြို့ဘယ်ဒေသဆိုတာ သတင်းမှာ ထည့်သွင်း ရေးထားခြင်း မရှိပါဘူး။
လင်းသူရိန် D Nae Khit Media
ပွီးခဲ့တဲ့ လအနညျးငယျကတညျးက လူမှုကှနျရကျမှာ ခတျေစားနတေဲ့ ဓာတျပုံလေးကတော့ မင်ျဂလာပှဲမှာ သတို့သားဟာ ဂိမျးကို စိတျဝငျတစား ဆော့နတေဲ့ပုံ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ မင်ျဂလာပှဲကိုတောငျ စိတျသိပျဝငျစားပုံမပွဘဲ၊ ဂိမျးကို သညျးကွီးမညျးကွီး ဆော့နလေို့-
လူမှုကှနျရကျပျေါမှာတော့ သူရဲ့လုပျရပျကို ခြီးကြူးသူထကျ ဝဖေနျသူက ပိုမြားနပေါတယျ။ တဈခြို့ကလညျး ဒီအမြိုးသားကို အလိုကျကမျးဆိုး မသိဘူးလို့ ပွောနကွေပါတယျ။ တကယျလညျး သူရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ မင်ျဂလာပှဲမှာ သူဟာ ဂိမျးကစားခငျြစိတျကို နညျးနညျးလောကျတော့ ထိနျးသငျ့တာပေါ့။
တဈခြို့ကလညျး ဒီအမြိုးသားရဲ့အပွုအမူဟာ အတျောလေး အတ်တကွီးတဲ့လူတဈယောကျရဲ့ အပွူအမူနဲ့ တူကွောငျး၊ သူဟာ မိဘမောငျဘှားတှကေ အလိုလိုကျလို့ ဆိုးနတေဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈပုံရကွောငျး၊ သူ့ရဲ့ သတို့သမီးအဖို့တော့ ကံဆိုးတယျလို့ ဝဖေနျနကွေပါတယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြကို WorldOfBuzz က ဖျောပွထားတာပါ။ သတို့သမီးဟာ ခငျပှနျးအသဈစကျစကျရဲ့ လုပျရပျကို အတျောလေး ဘဝငျမကြ ဖွဈနပေမေယျ့ မပွောသာတဲ့သဘောမှာ တှရေ့ပါတယျ။ ဧညျ့သညျတဈယောကျက လကျဖှဲ့ပေးတာတောငျ သူက တှနျးပဈလိုကျပါသေးတယျ။
ဗှီဒီယိုကတော့ TikTok ဗှီဒီယိုပုံစံနဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ပြံ့နှံ့နတောပါ။ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးတို့ အမညျကိုတော့ ဖျောပွမထားပါဘူး။ နောကျပွီး အိန်ဒိယက မင်ျဂလာဆောငျလို့သာ သိရပမေယျ့ ဘယျမွို့ဘယျဒသေဆိုတာ သတငျးမှာ ထညျ့သှငျး ရေးထားခွငျး မရှိပါဘူး။
လငျးသူရိနျ D Nae Khit Media
ကိုဗဈအန်တရာယျကို မမှုဘဲ ယူလငျးခှေးသားစားပှဲတျောကို အစဉျအလာအတိုငျး ဆကျလကျကငျြးပမယျ့တရုတျ
မိခငျမရှိခြိနျမှာ (၅)နှဈအရှယျ ညီလေးကို လညျပငျးညှဈသတျခဲ့တဲ့ (၁၇)နှဈအရှယျအဈကိုရဲ့ လုပျရပျ
နိုငျဂြီးရီးယားနိုငျငံသားတှကေ အမြိုးသမီးငယျတှေ ကာယိန်ဒွပေကျြပွားအောငျ နှောကျယှကျနေ
အမရေိကနျပွညျနယျ ၁၁ ခုမှာအရနျတပျတှေ ဆငျ့ချေါ